Maxaa Sababa Samboorka?Maxaase Lagu Daweeyaa | Gaaroodi News
Maxaa Sababa Samboorka?Maxaase Lagu Daweeyaa
September 27, 2016 | Published by: gaaroodi
Sanboor waxaa sababo xasaasiyad kiciye aan inta badan dhib u laheyn jidhka. Sanboorku waa falcelin aan caadi ahayn oo uu jidhka la sameeyo walxa aan dhibaato ku hayn jidhka. Manka ayaa ah xasaasiyad kiciyaha ugu badan ee sababo samboorka.
Maxaa sababa sanboor
Marka jidhkaaga uu la sameeya xidhiidh xasaasiyad kiciye, jidhku wuxuu soo daynaa maado la yidhaahdo histamine oo ah kiimiko kamid ah kuwa uu difaaca jidhka isticmaalo, kiimikadad waxay sababeysaa astaamaha sanboorka lagu garto.
Cowska ,Busta ,Dhogorta xoolaha ,Calyada bisadda ,Caaryada
Astaamaha iyo calamaadaha caanka ah ee lagu yaqaano sanboorka waxaa ka mid ah
Hindhiso ,Sanka oo xidhma , Sanka oo ku cuncuna ,Qufac ,Cunno oo cuncun Sameeya ,Indho oo ku cuncuna iyo Madax xanuun badan oo uu soo raaco daal.
Inta badan waxaa la dareema kuwo kamid ah astaamaha kor ku xusan isla marka uu jidhka la kulmo xasaasiyad kiciyaal. Calaamadaha qaar sida madax xanuun soo noqnoqda ama daal waxaa la dareemaa marka uu jidhka marar badan la kulmo xasaasiyad kicye. Xumad ma ahan astaan lala xidhiidhiyo samboorka.
Xasaasiyad waxey saameyn kartaa qof walbo, hasa yeeshee waxaa unugul inuu ku dhaco qof tolkiisu ay qabaan xasaasiyado taas oo loo yaqaan Hido raac .
Waxyaabaha kale ee kicin kara ama kaga dari kara samboorka waxaa ka mid ah:
Sigaar cabid ,Kiimikooyinka qaar ,Jawiga qabow,Huur ,Dabeyl,Hawo wasakheysan ,Cadarka iyo Dawooyinka samboorka
Dawooyinka loo yaqaano antihistamin
Dawooyinka fura sanka
Dawooyinka lagu buufiyo sanka inta waxa loo isticmaala dawaynta sanboorka xiliga uu kacsan yahay .
Fiiro gaar ah : fadlan la tasho dhaqtar inta aadan bilaabin qaadashada daawoda.